Cristiano Ronaldo Oo Juventus Kula Taliyay In Ay soo Qaadato Xidigan Katirsan Real Madrid
Tuesday November 27, 2018 - 20:49:40 in Wararka by Mogadishu Times
Sida ay baahisay Rai Sport kooxda Serie A, ayaa waqti diiradda saaratay soo qaadashada soo qaadashada weeraryahanka Real Madrid Marco Asensio, halka CR7 uu Juve ku dhiiri galinayo in ay lasoo saxiixato xidigii hore ee ay isku kooxda ahaayeen. Juve
Sida ay baahisay Rai Sport kooxda Serie A, ayaa waqti diiradda saaratay soo qaadashada soo qaadashada weeraryahanka Real Madrid Marco Asensio, halka CR7 uu Juve ku dhiiri galinayo in ay lasoo saxiixato xidigii hore ee ay isku kooxda ahaayeen. Juventus ayaa lagu soo warramayaa in ay isku diyaarinayso lasoo dhaqaaqidda xidiga weerarka qadka dhexe kaga ciyaara ee Real Madrid.
Wargayska ayaana intaas ku daraya in Cristiano Ronaldo uu madaxda sare ee Juventus kula talinayo in ay xoogga saaraan sidii Asensio ay ku keeni lahaayeen Bianconeri.
Asensio ayaa ku guul darraystau in uu kamod noqdo kooxda koobaad ee tababareSantiago Solari, isaga oo ku soo bilaawday seddex kulan oo kamid ah shanta kulan ee uu tababarahani hayo jagada macallinnimo ee kooxda Bernabeu.
Weeraryahanka heerka caalami ee reer Spain ayaa xilli ciyaareedkan ku bilaaban bandhjg qurxoon isaga oo xilli ciyaareedkan dhaliyay hal gool oo horyaalka ah.
Warkan ayaana ka dhigan in ay macquul tahay in Asensio uu ku biiro xoog waynta Serie A, maadaama ay doonayso in ay kooxdu ka dhabayso riyadeeda ah ku guulaysiga Champions League.